ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က ဘာနေ့လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က ဘာနေ့လဲ
ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က ဘာနေ့လဲ
Posted by manawphyulay on Jul 3, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
အရင်က တင်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့အတွက် တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အင်း… ကျွန်မ ခုပြောမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ မြန်မာမိန်းကလေးများ မြန်မာပီသပြီး ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်း စေချင်တဲ့ စေတနာတစ်ခု ကျွန်မရဲ့ စိတ်မှာ ကိန်းအောင်းနေမိပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးတရားကြောင့် မိန်းမဖြစ်လာရပေမဲ့ မြန်မာမိန်းမလေးဘဝ ဖြစ်လာရတာကို ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ ဂုဏ်တောင် ယူမိပါသေးတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကို အားကျပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံအများစုလည်း ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ ပြောလို့ရအောင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ တိုင်းတပါးတွေနဲ့ မတူအောင် သိမ်မွေ့နူးညံ့လှ ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ သိမ်မွေ့လှတဲ့အပြုအမူ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေဟာ ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။
ဟိုးရှေးခေတ်ထဲက ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကို ခင်တဲ့သူတွေက မေးကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်နော်တဲ့။ နို့ `ဘာလို့လဲ` မေးလိုက်တော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ နိုင်ငံခြားကို အထင်မကြီးလို့တဲ့။ ကဲ စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့။ ကိုယ်မြေ ကိုယ်ရေလောက် ဘယ်အရာမှ မကောင်းပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်၊ ကျောင်းသွားတတ်ကြတာတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ခဏသွားတာဆို ကောင်းပေမယ့် အပြီးဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ဝန်းကျင်မှာတောင် မိန်းကလေးအများစုဟာ သရုပ်ပျက် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လွှမ်းမိုးခံနေကြရပြီလေ။ တစ်ခါတလေလည်း ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ဆိုသလို တွေ့တွေ့လာတာ ရင်ထဲမကောင်းဘူး။ နိုင်ငံခြားသား/သူတွေက မြန်မာဝတ်စုံတွေကို မြတ်နိုးစွာဝတ်ဆင်ကြတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာက လူတွေက ဗရုတ်သုခအနောက်တိုင်းဟန်တွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးနေကြတာဆိုရင် အတော်များများ တွေ့နေရတယ်။ မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်တဲ့သူတွေကိုတောင် နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ကြသေးရဲ့။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ မြန်မာ တွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ ရိုးရာဓလေ့ နောက်မြန်မာမှု မြန်မာ့ဟန်နဲ့လုပ်တဲ့ ရိုးရာပွဲတော်တွေ ဘယ်လောက် ကျက်သရေ ရှိသလဲ။ ခုဆို မြန်မာအမျိုးသမီး တော်တော်များများ ပိုက်ဆံရရင် ပြီးပြီးရော လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတာတွေဟာ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ်သိုးသွားသလို ခံစားမိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း တွေ့ရတာတွေက ခေတ်ရှေ့ပဲ ပြေးနေတာလား။ ခေတ်ဆန်နေတာလား။ ကိုယ်ကပဲ ခေတ်တုံးနေတာလားဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်မဆိုလိုချက်က အလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုရင် ထိုင်မသိမ်းဝတ်ပြီး သွားဖို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများအမြင် ညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေနဲ့ နေနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အနေအထိုင်၊ အဝတ်အစား အနည်းငယ် ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို ခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရတာ မြို့လယ်ခေါင်တောင် ဖင်ပေါ်ခေါင်းပေါ်ဖြစ်နေကြတာတွေ အတော်များလာ မြင်တွေ့ ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်နေရာရောက်နေလဲ နိုင်ငံများမှားနေလား ထင်မိပါတယ်။ ဒါတောင် ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်တက်ရင် ဘောင်းဘီတို၊ စကပ်တို မဝတ်ရ ကန့်သတ်ထားတောင်မှ တက်ချင်တဲ့သူတွေက မနည်းမနော ရှိသေးတယ်။
ကျွန်မကတော့ လူသာ ဆင်းရဲရင် ဆင်းရဲမယ်။ စိတ်ဓာတ်တော့ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး။ လောကမှာ လူသာ သေပြီး နာမည်မသေဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား၊ သိက္ခာ၊ အကျင့်သီလ ဒါတွေဟာ ဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူး။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ သူများနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင် အလွန်သေးငယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ကြွေးကြော်ချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ရိုးရာကို ထိန်းသိမ်းကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်မ ဝမ်းသာမိမှာပါ။ မြန်မာဝတ်စုံဟာ မြင်သူတကာရဲ့ရင်မှာ အေးမြခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်း၊ လှိုက်လှဲနွေးထွေးမှုကို ပေးစွမ်းနေတယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိတယ်။ မနေ့ကတောင် နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးက မြန်မာလိုဝတ်ပြီး သူ့ကလေးတွေကို မြန်မာရိုးရာအဝတ်အစား ဝတ်ပေးထားတာ ကျွန်မ မြင်မိတော့ ဝမ်းသာကြည်နူးမှုကို ရင်ထဲဖြစ်ပေါ်လာမိပါတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့သူ ဝတ်တာတောင် ဒီလိုဖြစ်နေရင် ငါ့လူမျိုးတွေသာ ဒီလိုဝတ်ဆင်နေကြတာကို အမြဲမြင်တွေ့ရ မယ်ဆိုရင် ပိုတောင်ကောင်းမယ်လို့လည်း တွေးမိပါတယ်။ လောကမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အသက်ရှည်နေတာမှ မဟုတ်တာ မိဘ ဘိုးဘွားမောင်ဘွားတွေနဲ့ ကြီးပြင်းနေကြရတဲ့ ဝန်းကျင်မှာ ဒီလောက် သရုပ်ပျက်တွေ မရှိသင့်ဘူး လို့လည်း တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ရှိတာတွေချရေးရမယ်ဆိုရင် ရေးလို့တောင်မကုန်ပါဘူး။ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး မြန်မာမှုမြန်မာဟန်နဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းနေမိ ပါတော့တယ်။…..
အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့သည် မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျွန်မ သိထားသမျှကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီးများရဲ့ ရှေးခေတ်ဘဝဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အခြား အခြားသော နိုင်ငံများက အမျိုးသမီးများလိုဘဲ အားနွဲ့သူလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ကြရ ပါတယ်။ အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ ဆိုတဲ့ ဆုံးမစာအတိုင်း လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြရပါတယ်။ အပြင်ထွက် ပညာသင်ဖို့၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အလွန်ပဲ နည်းပါးပြီး အခွင့်အလမ်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီထဲကမှ ထူးချွန်တဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းတွေလည်း ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စာပေနယ်မှာ စစ်ကြိုခေတ်က ပထမဆုံး ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်လို့ ပြောရမဲ့သူကတော့ စာရေး ဆရာမကြီး ဒဂုန်ခင်ခင်လေးဆိုတာပါဘဲ။ သူက ၁၉၀၄ ခု ဖွားဆိုတော့ အတော်ကို စောပါတယ်။ ကျွန်မတို့တောင် ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိသေးတဲ့ ဘဝပါပဲ။ အဲ ၁၉၃ဝ လောက်မှာ နိုင်ငံရေး နိုးကြားမှုနဲ့အတူ စာပေမှာ ဝင်လှုပ်ရှား ခဲ့တဲ့ သတင်းစာဆရာမကြီးတွေ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြန်တာကို သိရှိခဲ့ရပြန်တယ်။ အင်း ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သတင်းစာထုတ်ဝေသူ အယ်ဒီတာကတော့ ဒေါ်ဖွားရှင်ပါတဲ့ရှင်။ နောက် ဒေါ်ထားထားတဲ့။ ပြီးတော့ အင်ဒပင်းဒင့် ဒေါ်စန်းတဲ့။ ကျွန်မလည်း သိမှတ်ရတာကို ပြောရတာပါ။ ကိုယ်မှာ မမွေးသေးတာကိုး။ သူတို့ဟာ ကိုလိုနီအစိုးရကို ကလောင်နဲ့ တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ မိန်းမ သူရဲကောင်းတွေပါဘဲ။
ခုဆို ကျွန်မတို့ခေတ်မှာတော့ အားနွဲ့သူတွေ မဟုတ်ကြတော့ဘူးလေ။ အမျိုးသားများနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသိစိတ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးများ ဟာ လှုပ်ရှားလာနေကြပြီလေ။ အမျိုးသမီးများရဲ့ဘဝမှာ မွေးလာစဉ်ကတည်းကပဲ ယောက်ျားသားတွေမှာ ရှားပါးလှတဲ့ မိခင်စိတ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တစ်ခု အရင်းခံ ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုဘဲ အမျိုးသားများကို တင်စားတဲ့ စာသားလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဘာတဲ့။ ကောင်းကင်တမွတ်၊ ကြယ်ကိုဆွတ်လည်း မလွတ်စတမ်း ရမြဲတမ်းဆိုလားဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းကင်က ကြယ်တံခွန်အသစ်ကို ဂျာမနီနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့တာကို သိခဲ့ရပြန်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ မြင့်မြတ်စွာ နားလည်သူတွေကတော့ ပုခက်လွှဲသောလက်သည် ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာပေါ့။ ဒေါက်တာ မတင်ဝင်းကတော့ ရာဇဝင်ထဲက မိန်းမသားဆိုဘဲ။ တော်တော်လေး ကောင်းတယ် ဖတ်ကြည့်ပါလား။ ကျွန်မကတော့ အမျိုးသမီးဆိုတာ လူသားတစ်ဦးပဲ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးရယ်၊ အမျိုးသားရယ် ခွဲခြားနေဖို့ မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ရဲတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လူသားပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ မည်သူမဆို အမျိုးသမီးဘဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားရင် အောင်မြင်မှာဘဲ စဉ်းစားကြည့်လေ။ အခု အမျိုးသားများရှိနေခြင်းဟာ အမျိုးသမီး ဆိုတဲ့ မိခင်များက မွေးဖွားခဲ့ကြလို့ပေါ့။ အဖြေက ရှင်းနေတာဘဲ။ မြတ်စွာဘုရားတောင် မယ်တော်မာယာက မီးဖွားသန့်စင်ခဲ့လို့ ဘုရားအဖြစ်ကို ရတော်မူခဲ့တာပေါ့။ ပြောရရင် သာဓကတွေ အများကြီးပါပဲ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများ အားကစားနဲ့ ကမ္ဘာကို လွှမ်းလာနေတာကိုလည်း တွေ့ရှိနေရပါပြီ။ ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာကတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်းကို သံမဏိပွင့်ဖတ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပန်းများ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မြင်ချင်တယ်။ ဘဝမှာ လောကဓံနှင့် နေရောင်ခြည်ကို အလွယ်တကူ အရှုံးပေးပြီး ကြွေကျပေးလိုက်တဲ့ ပန်းတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အသိဉာဏ်ဟာ တီထွင်ဖန်တီးဖို့ မဟုတ်ဘူး။
ချိုသာစွာ အမိန့်ပေးတတ်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ စနစ်တကျဖြစ်အောင် စီမံတတ်ဖို့နှင့်
အရည်အသွေးကို နားလည်တတ်ရမယ်။ ပြီးတော့ အသုံးကျမှုကိုသိဖို့နဲ့
ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ဖျားယောင်းမှုက လွတ်ကင်းနေရမယ်။ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်ဟာ
အမှားကင်းပြီး သွေဖည်ခြင်းကင်းရမယ်။ အင်းနောက်တော့ ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့ ပြည့်စုံနေရမယ်။
ဘဝင်မြင့်ပြီး အကြင်နာကင်းတဲ့မာနက ကင်းရမယ်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့
စိတ်နှင့်ပြည့်စုံပြီး မေတ္တာစိတ် ဆင်ခြင်စိတ်ရှိအောင် အတွေးအခေါ်နဲ့ ပညာ ပြီးတော့ လောကဓံတရားကို
ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သူ၊ သမိုင်းကို ထက်မြက်တဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့ ဖတ်နိုင်စွမ်း၊ နားလည်နိုင်စွမ်း
နှင့် ဘေးဒုက္ခတွေကို နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ ရင့်ကျက်စိတ်ရှိရမယ်။ မိန်းမတွေမှာ ပင်ကိုရှိနေတဲ့ နဂိုဗီဇစိတ်၊ ပါရမီစိတ်၊ သတိ၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာတရားတွေဟာ ဘဝရဲ့ မဏ္ဍိုင်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲ
ယုံကြည်ပြီး အောင်မြင်ထွန်းပေါက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူ ဖြစ်နေစေရမယ်။
ခုဆိုရင် မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကို နေရာတိုင်းမှာ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပြီး ဖွင့်ပွဲတွေ လုပ်လာတာကို တွေ့ရှိရခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မ ဝမ်းသာကြည်နူးမိသလို မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဦးစီးတဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ မှုတွေ၊ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေ ကျင်းပလာခြင်းအားဖြင့် ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို အသိအမှတ်ပြုလာတာတွေလည်း တွေ့ရှိနေရပါပြီ။ ဒီလိုဘဲ သုညတစ်လုံးထဲရှိခြင်းဟာ အသုံးမဝင်ပေမဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးအားလုံးဟာ တစ်ဆိုတဲ့ ဂဏန်းရဲ့နောက်မှာ သုညများစွာနဲ့အတူ တန်ဖိုးရှိသော အမျိုးသမီးများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ပြောရင်းနဲ့ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။
မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဒီထက် ဒီထက် ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပြုရင်း…
စာက ဖတ်ရတာ အရမ်းရှုပ်နေတယ်ဗျာ…
နောက်တစ်ကြိမ်တင်ရင် အပိုဒ်တွေ ခွဲပြီးတင်ပေးရင် ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်…
“သံမဏိပွင့်ဖတ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပန်းများ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မြင်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကတော့
အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ…ကြောက်လည်းကြောက်သွားမိပါတယ်…ပြီးတော့ ချစ်လည်း ချစ်ခင်သွားမိပါတယ်…
လေးပေါက်ရေ Happy Birthday နော် ….. မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျန်းမာပျော် ရွင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ …..
ဦးပေါက်က တွမ်ခရု နဲ့ မွေးနေ့တူတာပေါ့နော
လေးပေါက်နဲ့ မနောနဲ့ မွေးလချင်းတူတယ်နော်…
နိုရာလည်း မြန်မာဝတ်စုံကိုပဲ အရမ်းသဘောကျပါတယ်
ကျက်သရေ ရှိတယ်လို့လည်း ထင်တယ်လေ
ဒီဝတ်စုံကြောင့် သိက္ခာကျတာမျိုး မရှိပဲ
မန်းမှာတော့ ဆိုင်ကယ်နောက်က အမျိုးသမီးလေးတွေ စကပ်တိုနဲ့လိုက်ထိုင်ပြီးမှာ ဖုံးဖုံးဖိဖိ လုပ်နေကြတာတွေ၊ နွေရာသီမှာ ဦးထုပ်ကိုနေကာမှန်နဲ့စောင်း၊ နှာခေါင်းကို Mask ကာကွယ်တပ်၊ လက်ကိုလေပူတိုးမှာဆိုးလို့ အပူဒါဏ်ခံနိုင်တဲ့လက်အစွပ်ဝတ်ပြီးမှ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ခြေထောက်ပိုင်းကျတော့ အပူဒါဏ်ဘာလို့မကာကွယ်ကြတာလဲ စဉ်းစားလို့မရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပိုများလာသဗျ။
မနောရေ အမကတော့ အမနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးပဲဆွေးနွေးချင်တယ် …… မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့သတ္တိတွေ အင်အားတွေကို ဖခင်ယောက်ျားလေးတွေက ယှဉ်လို့မရနိုင်ပါဘူး မင်းအစားငါပဲဒီကလေးကိုမွေးချင်တယ် ဆိုတာ သူတို့အပြောပဲရှိတာပါ တကယ်ဆို ယောက်ျားလေးတွေက အမျိုးသမီးတွေလောက် စိတ်ဓာတ်ခွန် အားမပြည့်စုံသူတွေလို့အမထင်တယ် (ယောက်ျားလေးအားလုံးကိုမဆိုလိုပါ) ဥပမာလေးပြောပြချင်တယ် .. အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ယောက်ျားကလေဖြတ်သွားရင် မိန်းမက မညီမငြူပြုစုတတ်ကြပါတယ် အိမ်ဦးနတ်လို့ပြောဦးမှာလား မိန်းမတစ်ယောက်နာတာရှည်ဖြစ်ရင် အဲဒီယောက်ျားက စိတ်ရှည်စွာနဲ့ မိန်းမကို မပြုစုပေးပါဘူး အပျော်တစ်ခုခုတော့ရှာမှာပါ …… သူတို့ပြောပါလိမ့်မယ် ဘုရားဖြစ်တာ ယောက်ျားလေးတွေလို့ပါ ဒါပေမယ့် ဘုရားကတစ်ခါမှာတစ်ဆူပဲပွင့်ပါတယ် ဘုရားက ယောက်ျားလေးတိုင်းမဖြစ်ပါဘူး မိခင်ဆိုတာကတော့ အများကြီးရှိကြပါတယ် မိန်းမအများစုကလည်း မိခင်ဖြစ်ဖို့က အရေအတွက်များပါတယ် …… မြတ်စွာဘုရားကြိုးစားခဲ့တာကို ကိုယ်ကြိုးစားသလိုနဲ့ ငါတို့ယောက်ျားတွေက ဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်လို့အော်နေကြတဲ့ ယောက်ျားလေးဒုနဲ့ဒေးပါ တစ်ကယ်တန်းတော့ ဖြစ်ဖို့ကဝေးပါတယ် … နတ်ပြည်မှာ နတ်သားနည်းတယ် နတ်သမီးများတယ်လို့လည်းပြောပါဦးမယ် လူပြည်မှာသေရင် နတ်ပြည်ရောက်ပေမယ့် နတ်သားမဖြစ်ပါဘူး မယ်တော်မာယာကလူပြည့်မှာ မိန်းမပါ……. နတ်ဖြစ်တော့ နတ်သားဖြစ်နေပါတယ် …… ဒါလေးတွေကို တရားပွဲမှာ အမျိုးသားနည်းတယ် အမျိုးသမီးများတယ် နတ်ပြည်မှာ နတ်သားနည်းတယ်ဆိုတာတစ်ကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အမျိုးသမီးတွေ သေရင်မြင့်မြတ်သူတွေကနတ်သားဖြစ်ပီး အမျိုးသားတွေသေရင်လည်း နတ်သမီးမဖြစ်ဘူး လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး …… ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်အမျိုးသားတွေ ဆက်ဆွေးနွေးပါ …….
အစ်မမနောရေ … ဒီနေ့က မြန်မာ အမျိုးသမီးများနေ့ပါ …. ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုဖို့တော့ ပို့စ်တပုဒ်ရေးလိုက်ပါသေးတယ် .. ရေးရင်း ဖီလင်သိပ်မလာတာနဲ့ … ပို့စ်မဆုံးသေးဘူး ၊ ဒီတော့မတင်ဖြစ်သေးဘူး … ။
မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ ပါးစပ်ကနေ တဆာဆာအော်နေရုံနဲ့ … မြန်မာအမျိုးသမီး ပီသတယ်လို့ ကျွန်မ မမြင်ဘူး ။ မြန်မာအမျိုးသမီးလို့ သုံးနှုန်းတဲ့ နေရာမှာ … လူမျိုးကိုရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘူးနော် ..မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးတွေ (လူမျိုးစုံ)ကို သုံး တစုစည်းတည်း သုံးနှုန်းတာ … ။ အကျီ င်္တွေ လျှပ်ပေါ် လောလီနေတိုင်းလည်း … မြန်မာ မပီသတာ မဟုတ်ဘူး … ။
လွင့်မျောလာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်ပြီး ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုဆိုတာလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ ပြောင်းလဲမှာပါပဲ ။ ဒါကို ကျွန်မလက်ခံတယ် ။ ဘီးဆံပတ်ပတ်ပြီး ၊ ထမိန်နဲ့ ရင်ဖုံး ဝတ်ရမယ် မဆိုလိုပါဘူး .. မြန်မာအမျိုးသမီးမှန်လျှင ်မြန်မာ့ဓလေ့ မြန်မာ့ဟန် ၊ ထုံးတမ်းတွေကို မမေ့သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်မခံယူထားတယ် ။ မြန်မာ မိန်းမတစ်ယောက် ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် သူမဟာ မြန်မာမို့လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း လိုက်နာကျင့်ဆောင်မယ် ၊ လူကြီးမိဘတွေကို ရိုသေမယ် ၊ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းမယ် ၊ လင်ကိုဘုရား ၊ သားကိုသခင်လိုမျိုး အလုပ်ကျွေးပြုမယ်ဆိုလျှင်ပဲ … မြန်မာအမျိုးသမီးပီသတယ်လို့ … လက်ခံထားပါတယ် ။
အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုချင်း ကွာပေမယ့် ဦးနှောက်ဉာဏ်ခြင်း ထက်မြက်မှုခြင်း မကွာကြပါဘူး ။ အကျီ င်္ကိုပဲ ယဉ်ကျေးနေအောင် ဝတ်နေရင်းက မြန်မာအမျိုးသမီးဟေ့လို့ ကြွေးကျော်နေလျှင် .. သူများတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်လို့ အများကြီး ကျန်ခဲ့မှာပါ .. မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုလျှင် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းက လက်လှမ်းမှီသလောက် အကျိုးပြုခွင့်ရှိရမယ် မဟုတ်ဘူးလားဟင် … ။
အခုတီဗွီမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့အားဖြင့် … ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ လက်ရာပေါင်းစုံနဲ့ … ထွက်လာလိုက်တဲ့ မြန်မာ အကျီ င်္တွေ မနည်းမနောပဲ … ။ သရုပ်ဆောင်တွေကဒါတွေ ဝတ်ပြီး စင်ပေါ်တက်လျှောက်နေတာနဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ပီသသွားပြီတဲ့လား … မြင်ရတာ ..နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ်အစ်မရေ … ။ အဲ့လို ဝတ်စုံမျိုး ..တပတ်တရက်တောင် ဝတ်ခဲ့ရဲ့လားဆိုတာ … သိချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။
ဟိုးတလောက အမေစုမွေးေ့ န ့ကို အမျိုးသမီးများနေ့ အဖြစ်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်မယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ တွေ့လိုက်ရသေးတယ် .. ။ တကယ်မှတ်လို့ … ဝမ်းသာသွားမိသေးတယ် …။
မ မနောရေမှန်တာတွေပြောနေပြန်ပါပြီ။ ခေတ်မှီတာနဲ့ ခေတ်ဆန်တာကိုခွဲခြားပြီး ခေတ်နဲ့ အညီအတွေးအခေါ်တွေရင့်ကျက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့..။
မြန်မာ အမျိုးသမီးများ…..နေ့မှာ.သတိတရ တင်လိုက်တဲ ့ပို ့စ်လေးအတွက်
တို့ များရဲ့အမျိဲးသားနေ ့ရောက်ရင် လည်း…..ခံစားချက်ကို စာလေး ဖွဲ ့ပါဦးနော့ ။
မနောက…စာဖတ်အားလည်း.ကောင်း ..စာရေးအားလည်း.ကောင်း.. စာပေ ဖန်တီးမှု.ကလည်း.ကောင်းတော့..
မနောရေးတာ ဆို..ဖတ်ချင်နေတယ် .။
အချင်းချင်း.မြျောက်နေပြီ…လို ့မ ထင်နဲ ့နော် ။ တကယ်မြှောက်တာ အဲ.တကယ်ပြောတ ာ..
ဇူလိုင် (၃ )ရက်နေ့ကမြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့လေ။
မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့မှာ ဗမာ့အမျိုးကောင်းသမီးများအတွက် တန်ဖိုးရှိလှတဲ ့ပို ့စ်တစ်ပုဒ် ရေးလိုက်တာ အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အထိမ်းအမှတ်လည်းဖြစ်၊ သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေပါ ပါအောင် ထည့်ရေးထားတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ပိုကောင်းတာပေါ့။ တခြားနိုင်ငံက မိန်းမတွေဆို ပြောကိုမပြောချင်ဘူးလို ့ဆိုရမှာပဲလေ။ ကျနော်တို ့နိုင်ငံက အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အတုယူ မမှားစေချင်ဘူးဗျာ။
မြန်မာ့အမျိုးသမီးများနေ့ ကို ကြိုဆိုပါတယ် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကလည်းပြသပေးတယ် မြန်မာအမျိုုးသမီး လေးများ ဝတ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု ကိုကြည့်ရတာလည်းမြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု ဝတ်စားတာကိုစနိုးလည်းအားကျပါတယ်။
အနာဂတ်၏ မိခင်လောင်းလျာများကို ဂုဏ်ပြုပါ၏။